Ratra mahazatra indrindra rehefa mitaingina soavaly sy ny fomba hisorohana azy ireo | Soavaly Noti
Jenny monge | | soavaly, Fitaingenan-tsoavaly
Ny mitaingina soavaly dia hetsika fanatanjahan-tena izay ny mpitaingina dia miasa faritra ara-batana maro. Manampy ny hozatry ny tonony izany, mitazona fihetsika tsara ary koa fanatanjahan-tena tsara ho an'ny kardia. Ho fanampin'izany, mazava ho azy, amin'ny tombony ara-tsaina entiny, toy ny fanadiovana ny saina.
Hetsika iray izay ny fifandanjana eo amin'ny soavaly sy ny mpitaingina azy dia tsy maintsy lavorary. Misy karazana fomba fanatanjahan-tena isan-karazany ao anaty mitaingina soavaly, samy manana ny mampiavaka azy eo amin'ny lafiny fanomanana ara-batana, fiofanana amin'ny mpitaingina sy soavaly, fitaovana sns. Ary noho izany hMisy ratra matetika kokoa amin'ny famaizana iray na hafa, fa amin'ny ankapobeny ny karazana ratra mitovy amin'izany dia avy amin'ity fanatanjahantena ity na inona na inona fomba fanao ampiharina.
Amin'ny soavaly dia samy mety ho maratra ny mpitaingina sy ny soavaly ankehitriny andao hifantoka amin'ny ratra amin'ny mpitaingina sy ny fomba hisorohana azy ireo Vonona ve ianao?
Azo inoana, indrindra ireo mpitaingina tsindraindray, fa ny fampiharana an'ity fanatanjahantena ity dia tsy mitaky fitakiana ara-batana lehibe avy amin'izy ireo. Fahadisoana mahazatra loatra ity izay mety hitarika ho amin'ny ratra amin'ny hozatra sy hozatra noho ny fihoaram-pefy, ratra ary / na vaky noho ny fahalavoana noho ny tsy fahalalana ny teknika mitaingina soavaly.
Izay no antony anamafisantsika izany Ny mitaingina, indrindra ny tsy mety sy tsy misy fitaovana ilaina, dia mety hiteraka ratra mafy toy ny lozam-pifamoivoizana, ny vaky vertebral, ny ratra amin'ny hazondamosina na ny karazana ratra hafa izay afaka mamela ny seza. Ka ho fantatsika hoe inona ny loza ateraky ny mitaingin-tsoavaly ary, ny tena zava-dehibe, ny fomba hisorohana azy ireo na hampihenana ny fahasimbana.
1 Naratra tamin'ny soavaly
2 Ratra vokatry ny fitaovana tsy mety
3 Ratra nianjera tamin'ny soavaly
4 Ratra amin'ny fihenan'ny hozatra
5 Ratra mahazatra hafa
5.1 Ny lohalika
5.2 Hozatry ny tongotra
5.3 Ny valahany
Naratra tamin'ny soavaly
Ilaina ny manomana ny soavaly alohan'ny hanaovana karazana soavaly mitaingina soavaly, mandritra io dingana io dia mety hijaly noho ny antony samihafa isika rangotra miaraka amin'ny tontolo iainana, manaikitra na fanitsakitsaky ny soavaly. Ary mazava ho azy, ny fantatra daka.
Mandritra ny dingan'ny fanomanana ny Equine dia tsy maintsy mitandrina ny fihetsiky ny biby isika mba hisorohana ireo ratra rehetra ireo izany dia mety ho vokatry ny biby mihorohoro sy mihetsika, mandratra antsika.
Ratra vokatry ny fitaovana tsy mety
Ny fanatanjahan-tena rehetra dia manana fitaovana ilaina tsy ho fanavahana ilay fanatanjahantena voalaza ihany fa izy ireo koa natao hanampiana antsika hanatanteraka fampiharana marina sy azo antoka azy io. Amin'ny soavaly mitaingina soavaly no ilainao: baoty, pataloha mitaingina, fonon-tànana, fiarovan-doha ary akanjo fiarovan-tena. Indraindray, ny fampiasana solomaso dia ampirisihina ihany koa amin'ireo hetsika atao eny an-tsaha.
Ny tsy fampiasana ny equine marina dia mety hiteraka: ratra amin'ny tanana, ratra na erosion amin'ny zanak'omby, fahasosorana amin'ny tongony sy vodiny, dona mafy an-doha sns.
Ratra nianjera tamin'ny soavaly
Ny iray amin'ireo antony mahazatra mahatonga ny ratra amin'ny mpitaingina dia ny fianjeran'ny soavaly. Ny ratra mahazatra indrindra amin'ireo tranga ireo dia taolana tapaka toy ny taolan-tehezana, clavicle na hazondamosina.
Amin'ny tranga maro dia misy koa ny vaky amin'ny taolana amin'ny tanana na ny fivezivezena ao amin'ny humerus rehefa manandrana mihazona ny kibo mandritra ny fahalavoana. Ity hetsika reflex ity dia mitranga na manandrana tsy hianjera ary mba tsy ho afa-mandositra ilay biby. Misy ny ady hevitra eo amin'ny hoe tsara ve ny fihazonana ny vombana na tsia, satria mety hiteraka ratra amin'ny tanany sy ny hazondamosiny, fa amin'ny lafiny iray, mampihena ny hafainganam-pandehan'ny fahalavoana izany ary mazàna manakana ny kapoka amin'ny loha hatrizay amin'ny maro Indraindray dia mahatonga antsika hianjera amin'ny tongotsika izany.
Tsy azo ihodivirana ny fianjerana amin'ny soavaly amin'ny fotoana sasany na amin'ny fomba hafa, na izany aza ahoana raha azontsika atao ny misoroka ny ratra ateraky ny fahalavoana amin'ny alàlan'ny fanaovana fitaovana mety, izay ilaina ny fiarovan-doha.
Ratra amin'ny fihenan'ny hozatra
Rehefa mitaingina soavaly dia hozatra be dia be ny hozatra, toy ny kibo, ny vodiny na ny lamosina. Na izany aza, amin'ny mpitaingina matihanina na mahazatra, azo antoka aretina azo avy amin'ny mitaingin-tsoavaly, indrindra any amin'ny lamosina ambany.
Tokony hotadidina fa rehefa manao fanazaran-tena mitaingina soavaly, Ny hozatra sasany dia mivoatra betsaka, raha ny hozatra mifanohitra kosa tsy mandeha ary noho izany dia tsy mivoatra. Ary izany no mahatonga ny hozatra lasa tsy mahay mandanjalanja ka miteraka aretina sy olana lamosina miverimberina sy / na fiaraha-mientana eo amin'ny hazondamosina.
Mba hampihenana ny loza mety hitranga amin'ireo ratra ireo dia ilaina izany miasa ny hozatra hampitombo ny volanao Ahoana no? fanaovana fanazaran-tena sasany izay mampitombo ny isan-jaton'ny masin'ny hozatra ao an-damosintsika mba hisorohana ny mitaingina soavaly tsy hisy fiatraikany amin'ny hazondamosintsika. Tsy zavatra mitokana amin'ny mitaingin-tsoavaly io, fa amin'ny fanatanjahantena maro, ilaina noho izany ny fampiofanana vatana iray manontolo ho an'ny atleta.
Andao haka ohatra iray hanazavana izany. Ny mitaingina soavaly dia miasa betsaka amin'ny bisikileta, ny fehin-tànana sy ny rantsan-tànana, ny fandrika ary ny hazondamosin'ny erector. Noho izany, ny fanazaran-tena izay miasa amin'ny tricep, ny fehiloha sy ny rantsan-tànana, ny pectoral ary ny kibo dia tokony hatao mifanindry. Amin'izany fomba izany dia hialantsika amin'ny ratra mamaivay amin'ireo faritra amin'ny vatantsika ireo.
Ratra mahazatra hafa
Ity ampahan'ny tongontsika ity dia iray amin'ireo mety hijaly indrindra amin'ny fampiharana ny mitaingin-tsoavaly, satria ny toerana misy azy miaraka amin'ny fitondrana azy ireo manakaiky ny vatan'ilay biby, dia miteraka fijaliana hozatra.
Hozatry ny tongotra
Ireo mpampiditra ny feny noho ny fampiasany hitazona sy hikarakara ny soavaly, afaka mijaly be izy ireo ary miteraka fibrillar.
Ny hozatry ny zanak'omby sy ny tadin'ny achilles dia mety haratra, arakaraka ny fomba ampiasana ilay onja.
Noho ny fisokafan'ny tongotra ilaina amin'ny mitaingin-tsoavaly ary arakaraka ny fikapohan'ilay mpitaingina azy, mety hanadino ny valahany mihitsy aza amin'ny fotoana sasany.
Na dia amin'ny zava-drehetra aza, aza matahotra, miaraka am-piomanana tsara ary amin'ny fahamalinana dia afaka mitaingina soavaly soa aman-tsara ianao. Ary mazava ho azy, raha sendra olana any aoriana dia tsara ny manatona dokotera alohan'ny mitaingina.
Manantena aho fa mankafy mamaky ity lahatsoratra ity ianao toy ny anoratako azy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Soavaly noti » soavaly » Ratra mahazatra indrindra rehefa mitaingin-tsoavaly